पशुपतिनाथको २३१ रोपनी जग्गा नै गायब ! कसले खायो पशुपतिनाथको जग्गा ? - VOICE OF NEPAL
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०१:१८ 139 ??? ???????
– सुरेन्द्र काफ्ले/ गोपीकृष्ण ढुंगाना
काठमाडौं : भनिन्छ– पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन् । तर, नेपालका भूमाफिया यति शक्तिशाली छन्, जसबाट पशुपतिनाथले आफ्नै जायजेथा रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् । पशुपतिका नाममा रहेको उपत्यकाकै कम्तीमा दुई सय ३१ रोपनी १० आना जग्गा कहिले कसले खायो पत्तै छैन ।
विश्वरूप मन्दिर परिसरको ५ रोपनी ४ आना, कोष परिसरको ६८ रोपनी ७ आना २ दाम जग्गा रहेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपतिको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा ९४६ रोपनी १ आना २ पैसा छ । नेपाल आँखा अस्पतालले ३२ रोपनी जग्गा चर्चेको छ । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाले २० रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । महास्नान पोताका नाममा १२४१ रोपनी १ आना २ पैसा जग्गा छ । गुठी संस्थानको नाम १०१५ रोपनी १५ आना १ पैसा छ ।